Dowladda UK oo digniin amni ka soo saartay dalalka Kenya iyo Soomaaliya - Awdinle Online
Dowladda UK oo digniin amni ka soo saartay dalalka Kenya iyo Soomaaliya
January 12, 2020 (Awdinle Online) –Dowladda Ingariiska ayaa muwadiniinteeda u safraya dalka Kenya waxaa ay u dirtay digniin ku saabsan inay taxadar muujiyaan inta ay ku sugan yihiin gudaha dalka Kenya.
War qoraal ah oo ka soo baxay Wasaaradda arrimaha dibadda UK ayaa lagu yiri, “Muwaadiniinteena Kenya ku sugan waa inay ka fogaadaan xadka ay wadaagaan Kenya iyo Soomaaliya, gaar ahaan dhinaca waqooyi bari Kenya ugu yaraan masaafo dhan 60KM, kuwa u dalxiis tagaya gobolka xeebta waa in aysan xuduuda Soomaaliya u dhawaan ilaa 15 KM.
“Argagixisadu waxay u badan tahay inay isku dayaan inay weerarro ka fuliyaan Kenya. Waxaa jira hanjabaado saa’id ah oo ka soo yeeraya, oo ay ku jiraan afduubyo argagixiso, oo laga geysanayo guud ahaan Kenya” ayaa lagu yiri bayaanka qeyb ka mid ah.
Warkan ayaa sidoo kale waxaa lagu yiri, “Waxaa suuro gal ah inay weerarro ka dhacaan goobaha ajaanibta ay ku badan yihiin sida hoteelada, xeebaha, dhismeyaasha dowladeed, tagaasida gaarka ah ee garoomada, dukaamada, xafladaha, gooba cayaaraha loogu daawasho tago, iyo meelaha kale ee lagu tamashleeyo.
Dowladda Ingariiska oo ka mid ah dowladaha sida wayn saaxiibka dhow ula ah dowladda Kenya ayaa tan iyo horaantii bishan weerarkii lagu qaaday xerada Mandha Bay ee ism aamulka Lamu, waxay walaac ka muujinaysay in muwaadiniinteeda dhibaato ay ka soo gaarto weerarro kale oo ka dhaca gudaha dalka Kenya, halka dowladda Kenya ay isku dayeyso inay aad u adkeyso ammaanka dalkeeda.
Previous articleAl-Shabaab oo fariin hanjabaad ah u dirtay dowladda Mareykanka
Next articleXildhibaan fiqi oo ka hadlay wixii lagu sameeyay Musharax Xildhibaan Ibraahim Xasan